Tongava fotsiny ho toy izany! , Fiangonan'Andriamanitra an'Andriamanitra Suisse (WKG)
Nampiasa fomba fitenenana i Billy Graham handrisihana ny olona hanaiky ny fanavotana ananantsika ao amin'i Jesosy: Hoy izy hoe: "Ho tonga ihany ianao!" Mampahatsiahy fa mahita ny zava-drehetra Andriamanitra: ny tsara indrindra sy ratsy indrindra. ary mbola tia antsika izy. Ny antso hoe "ho avy rehefa avy" ianao dia taratry ny tenin'ny apostoly Paoly:
“Satria maty ho antsika Kristy tamin'ny fotoana nahamalemy antsika. Ankehitriny dia saiky tsy misy olona maty noho ny marina; angamba noho ny mahasoa azy dia sahy mivavaka aminy. Fa Andriamanitra maneho ny fitiavany antsika, satria Kristy maty ho antsika fony mbola mpanota isika ”(Romana 5,6: 8-XNUMX).
Betsaka ny olona ankehitriny tsy mieritreritra ny momba ny ota intsony. Ny taranaka maoderina sy postmodernal kokoa dia mieritreritra bebe kokoa momba ny fahatsapana fahatsapana ho "fahafaha-manao", "tsy manana fanantenana" na "tsy fahatokisan-tena", ary hitan'izy ireo ny anton'ny tolona anatiny ao anaty fahatsapana fahatongavany. Mety hiezaka ny ho tia ny tenany izy ireo ho fomba iray hahatongavany ho tiana, fa ny tsy azo inoana kokoa dia tsapan'izy ireo fa feno tanteraka sy tapaka ary tsy ho azo antoka intsony izy ireo. Andriamanitra dia tsy mamaritra antsika amin'ny alàlan'ny lesoka sy ny tsy fahombiazantsika; mahita ny fiainantsika manontolo izy. Ny ratsy toa ny tsara ary tia antsika tsy misy fepetra izy. Na dia tsy sarotra aza ny itiavan’Andriamanitra antsika, dia matetika isika dia manasarotra ny fanekena an’izany fitiavana izany. Fantatsika tsara fa tsy mendrika an'io fitiavana io isika.
Tamin'ny taonjato faha-15 dia niady mafy i Martin Luther mba hanana fiainana tonga lafatra ara-moraly. Hitan'izy ireo foana fa tsy nahomby izy. Tao anatin'ny fahasorenany dia nahita fahalalahana izy tamin'ny farany. Mandra-pahatongan'izany dia efa nahafantatra ny fahotany i Luther - ary tsy nahita famoizam-po fotsiny - fa tsy nampahafantatra an'i Jesosy, ilay zanak'Andriamanitra lavorary sy tiana, izay nanaisotra ny fahotan'izao tontolo izao, anisan'izany ny fahotan'i Lotera.